ny finoana Kristianina sy ny maha-malagasy - Dinika forum.serasera.org
ny finoana Kristianina sy ny maha-malagasy
Fitohizan'ny hafatra : ny finoana Kristianina sy ny maha-malagasy
mamymnr - 11/11/2017 06:26
Maninona hoy ianareo no lazain'ny Kristianina fa fanompoan-tsampy avokoa izay fombafomba Malagasy hatrizay ? Toy ny fanandroana, ny raok'andro, ny sikidy, sambatra ans ... Singaniko ireo tomba malagasy sasany izay entina manao sy manisy ratsy ny hafa toy ny mosavy ssy ny mamorika. Tsy mahatsapa ve isika fa tomba noentin'ny tandrefana hanimbana ny kolontsaina sy ny maha izy azy ireo firenena zanahany ity fivavahana ity. Mialatsiny mampiasa ity teny ity "théorie" be fotsiny fa tsy tena hiainana akory. Ary maro .be ny tranga terena fotsiny hoe inoy nefa tsy hita mazava akory hoe voamarina tokoa ve fa izany.
stahtam - 13/11/2017 06:24
Mba hanjanahany ny taninao!! Inona no hevitr'ilay hoe: "Raha misy mamely tehamaina ny takolakao havia dia mba atolory azy koa ny havanana"?
- Valiny: Raha misy mandroba ny volamena sy ny saphir-nao dia omeo azy koa ny taninao (fa raha tsy izany tsy hisy mpanam-bola hampiasa ny volany izany eto aminao).
Miharena - 13/11/2017 09:02
Tsy ny Kristianina no milaza fa tsy mety ireo fomba ireo fa ny Baiboly.
Ary raha hilaza Mamymnr hoe angano sy fiheverana fotsiny ny ao anaty Baiboly dia diso tanteraka satria aoka ho fantatsika fa matoa misy izao fikorontanana izao dia efa voambara ilay fototry ny olana.
Azontsika hadihadiana fohy ny voalaza ao amin'i Isaia manaraka eto:
1 Fa Jehovah hamindra fo amin'i Jakoba, ary mbola hifidy ny Isiraely indray ka hamponina azy ao amin'ny taniny; ary ny vahiny hikambana aminy, ary ny taranak'i Jakoba ho namany
2 Dia haka azy ny firenena ka hanatitra azy hody; ary ny taranak'Isiraely hanana azy ho ankizilahiny sy ankizivaviny ao amin'ny tanin'i Jehovah; dia ho tonga mpamabo izay namabo azy izy; ary hampanompo izay nampahory azy.
3 [Hira fifaliana hataon'ny Isiraely noho ny nanetrena ny mpanjakan'i Babylona] Ary amin'ny andro hanomezan'i Jehovah fitsaharana anao ho afaka amin'ny fahorianao sy ny fitebitebin'ny fonao ary ny fanompoana mafy izay nampanompoana anao,
4 dia hataonao izao oha-teny ny amin'ny mpanjakan'i Babylona izao: Hià! mitsahatra ilay mpampahory! Eny. tsy ao intsony ilay tanàna volamena! [Na: mampandoa hetra]
5 Jehovah efa nanapatapaka ny tehin'ny ratsy fanahy. Dia ny tehina fanapahan'ny mpanapaka,
6 Izay namely firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny famelezana tsy nanam-pitsaharana, sady nampanompo firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny fanenjehana tsy misy antra.
7 Miadana ka mandry fahizay ny tany rehetra; Velominy ao ny hoby,
8 Eny, ny hazo kypreso sy ny sedera any Libanona hifaly anao hoe: Hatrizay niambohoanao izay dia tsy nisy mpikapa niakatra tat? aminay.
9 Taitra ny fiainan-tsi-hita* any ambany noho ny aminao mba hitsena anao amin'ny fihavianao; Mamoha ny matoatoa hitsena anao izy, dia ireny bibilahy** rehetra tambonin'ny tany; Aingainy hiala amin'ny seza fiandrianana ny mpanjakan'ny firenena rehetra.[*Heb. Sheola][**Heb. osilahy]
10 Izy rehetra samy hiteny aminao hoe: Hay! ianao koa mba efa osa tahaka anay! Efa tonga tahaka anay ianao!
11 Efa navarina ho et? amin'ny fiainan-tsi-hita* ny tabihanao mbamin'ny feon'ny valihanao; Kankana no ilafihanao, ary olitra no mandrakotra anao.[Heb. Sheola]
12 Endrey! latsaka avy tany an-danitra ianao, ry ilay fitarik'andro, zanaky ny maraina; Voakapa hianjera amin'ny tany ianao, ry ilay mpandripaka firenena.
13 Ary ianao efa nanao anakampo hoe: Any an-danitra no hiakarako, ary ambonin'ny kintan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako; Dia hipetraka eo an-tendrombohitra; fivoriana any am-parany avaratra aho;
14 Hiakatra ho any ambonin'ny havoan'ny rahona aho ka ho tahaka ny Avo Indrindra;
15 Kanjo hampidinina hatrany amin'ny fiainan-tsi-hita* ho any ampara-vodilavaka ianao.[Heb. Sheola]
16 Izay mahita anao hibanjina anao sy hihevitra anao hoe: Moa io va ilay lehilahy nampihorohoro ny tany sy nampihozongozona ny fanjakana
17 Ary nanao izao tontolo izao ho efitra sy nandrava ny tanànany Ary tsy nandefa ny mpifatotra hody?
18 Ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena samy mandry amin'ny voninahitra avokoa, ary samy ao am-pasany* avy;[Heb. tranony]
19 Fa ianao kosa dia nariana niala lavitra ny fasanao, tahaka ny solofon-kazo ratsy izay ariana, sady voatsindrin'ny fatin'ny voavono ianao, dia ireo voatrabaky ny sabatra, ka midina ho ao amin'ny vato ao an-davaka, tahaka ny faty hitsakitsahin'ny tongotra.
20 Tsy halevina tahaka ireny ianao, satria efa nanimba ny taninao sady efa namono ny olonao; tsy hotononina mandrakizay ny taranaky ny mpanao ratsy!
21 Manamboara famonoana hamelezana ny zanany noho ny heloky ny razany; tsy hitsangana hanana ny tany izy, Na hanorina tanana eran'izao tontolo izao.
22 Fa hitsangana hamely azy aho, hoy Jehovah, Tompon'ny maro, ary hofoanako ny anaran'i Babylona sy izay sisa ao mbamin'ny zanany sy ny taranany, hoy Jehovah.
23 Ary hataoko fonenan'ny sokina sy fihandronan'ny rano izy, ary hofafako kifafa fandringanana izy, hoy Jehovah, Tompon'ny maro.
24 Jehovah, Tompon'ny maro, efa nianiana hoe: Araka izay noheveriko no hatao aminy ary araka izay nokasaiko no hotovina aminy,
25 Dia ny hanorotoro ny Asyriana ao amin'ny taniko, ary ny hanitsakitsaka azy eny an-tendrombohitro; ny zioga fitondrany dia hiala amin'ireo, ary ny entany ho afaka amin'ny sorony
26 Izany no fikasana ny amin'ny tany rehetra, ary izany no tanana ahinjitra amin'ny firenena rehetra.
27 Fa Jehovah, Tompon'ny maro, no efa nikasa, ka iza indray no hahafoana izany? Ary ny tànany dia voahinjitra, ka iza no hampihemotra izany?
28 [Faminaniana ny loza hanjo an'i Filistia] Tamin'ny taona nahafatesan'i Ahaza mpanjaka no nisy izao faminaniana ny loza hanjo izao:
29 Aza mifaly, ry Filistia rehetra, saingy tapaka ny tsorakazo namely anao; fa avy ao an-kibon*'ny bibilava no hihavian'ny menarana, ary ny aterany ho tonga menaran'afo** manidina.[*Heb. fakan'][**Heb. sarafa]
30 Ny faraidina indrindra* hihinana, ary ny mahantra handry fahizay; Fa hataoko maty mosary kosa izay tsy ringana aminao**, eny, izay sisa aminao ho matiny.[*Heb. matoan'ny mahantra][**Heb. ny fakanao]
31 Midradradradrà, ry vavahady, ary mitaraina, ry tanàna; Aoka ho ketraka avokoa ianao, ry Filistia! Fa misy setroka mitranga avy any avaratra, ary tsy misy miala amin'ny laharany akory ny miaramilany.
32 Ary inona moa no valiny ho entin'ny iraky ny jentilisa? Izao: Jehovah efa nanorina an'i Ziona, ary ao no hialofan'izay olony ory.
Azo ampifandrindrana amin'ny zava-misy ankehitriny io faminanian'i Isaia io. Dia azo fantarina ao ny fototry ny ratsy fa tsy misy idiran'izay vazaha nampiditra ny Baiboly teto io fa dia mampianatra tsara ilay Baiboly nentiny fa tsy mamitaka akory.
endriny - 13/11/2017 09:09
Tsy angano hono fa Tena marina no nolazain'ny baiboly. Dia aleo aho hangina fa aleo ny tantaran'ny Genesisy no anambara ny Marina lazaina. Ary I Paoly no amelabelatra ny nofiririniny.
Miharena - 13/11/2017 09:25
Raha angano sy nofy ririnina dia tsy nisy ny fanasitranana mahagaga isan-karazany etsy sy eroa ary tsy mba miadana am-po hoatra ahy sy ny namana maro Kristianina toy izao izahay mino Endriny fa dia fadiranovana lava a!
Sa Endriny toy izany izao!?
stahtam - 13/11/2017 12:29
Ampiako iray indray: "Raha misy maka ny akanjonao dia omeo azy koa ny lambanao". Nahoana ny Vazaha izay "nitondra ny baiboly" teto no tsy manao izay voalaza ao fa ny "zanataniny" foana no asainy manatanteraka ireny resaka ireny ? valiny: rehefa tsy mahatsiaro ny lasa dia voaozona hamerina izany
Miharena - 13/11/2017 14:57
Mba hanampiana ilay valin'ny fanontaniana dia ity misy teny ao amin'ny Levitikosy 19: 26-37 izay mbola mihatra amin'ny fiarahamonina mikorontana ankehitriny ny tsy fanarahana azy ary milaza io resaka fanandroana sy sikidy io eo amin'ny toko faha-31:
27 Aza manety ny sisim-bolon-dohanareo, ary aza manaratra ny saokanao.
34 Ny vahiny eo aminareo dia hataonareo tahaka ny tompon-tany aminareo ihany ka ho tianao tahaka ny tenanareo; fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta ianareo: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.
Amin'io izao dia tsy ny Kristianina no mandrara fa Jehovah, izany hoe ny Baiboly.
mamymnr - 15/11/2017 06:58
[Mivoana amin'ny hevide hoibe resahana ny ankamaroan'ny valiny eto. Izay ilay nahatonga ahy nilaza fa théorie be fotsiny ny ankamaroany amin'nilay resaka fa tsy ampiharina amin'ny fiainana akory. Tsy ny baiboly mihitsy akory no ratsy. Ary ny baiboly dia boky toy ny boky rehetra ihany fa ny hafatra entiny izay mitory ny fitiavana sy nampitana ireo lalàna sy fomba fitondrana tena izay mampiavaka ny olona tamin'ny biby no nampavaka azy indrindra amin'ny boky rehetra. Tonga Kristianina ary ny ankamaroan'ny Malagasy izao ary niala tamin'ireo fomba amampanao maha -Malagasy azy izay lazaina fa fanompoantsampy. Izao anefa no fanotaniana apetrako amintsika : Iza no tsaratsara kokoa ny fiaraha-monina Malagasy ankehitriny izao ve izay lazaina fa Kristianina ny ankamaroan'ny olona sa ny fiaraha-monina Malagasy fahiny izay nifototra tamin'ny hoe "aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-piavanana" sy ny hoe "tain'omby voavadika ary tsy misy maka"
Ka mety tsy dia tena mazava amin'ny sasany angamba ny tiana hambara dia ny fanajana ny FOTOTRA NIPOIRANA. Ny Malagasy hatrizay dia nahalala ny Nahary azy koa, "IZAY NAHARY nafohezina moa izany hoe ZANAHARY". Ny hitako mahavoa ny rehetra dia ny nametrahana fa ilay Nahary izao rehetra izao dia nofaritana tamin'ny anarana iray. Andriamanitra, Allah, Dieu, sns ... Teo sahady aloha dia efa voazarazaran'izany fiantsoana izany izao ary rehetra izao. MIara-mahalala anefa isika fa na hiantso Andriamanitra ianao na Allah na Dieu dia Iray ihany no tianao antsoina dia ILAY TOKANA izay nihavian'izao rehetra izao. Tokony mifanaja fotsiny ny finoana tsirairay eo anatrehan'izany ary tsy tokony hisy hifanaratsy satria ny tena fototra dia iray ihany ary tsy misy afaka ny tena hilaza fa ny azy no marina ary tsy tokony koa hisy ny hilaza fa raha mandala ny finoana nitaizan'ny razambeny azy ny olona iray dia diso sy mpanompo sampy. Izay marivo salosana tsy mitana ny finoany sy mora norese'ny sasany lahatra amin'ny zava-poana no tokony hisaina.
Isika Malagasy izao dia misy mandiso ny Mpanjaka Ranavalona I satria nanohitra ny fidiran'ny Kristianisma teto amin'ny nosy izy. Izaho anefa milaza fa tsy nisy olona sy mpitondra tia tanindrazana toy ny Mpajaka Ranavalona I hatramin'ny androny ka hatramin'izao hiainantsika izao ka tena niaro izany maha-Malagasy izany tokoa. Ny mpamadika niara-niasa tamin'ny tandrefana no taloha betsaka sy ny ankehitriny mivarotra ny taniny amin'ireo aziatika no manjaka ankehitriny.
Ka manompo sampy ary ve izany sady diso Ny Mpanjakantsika fahiny izay Nivavaka tamin'IZAY NAHARY sy nanaja ny Razany sy ny Fahalalan'ireo Mpanandrony tamin'izany fotoana izany hoy ianao ka tsy nisy naka na ny tain'omby voavadika ary fa ankehitriny ireo mivavaka amin'ny mpitondra ny hafatry ny fifakatiavana izay tsy hajaina akory fa toa lasa antokom-pivondronana sy atao "étiquette" fotsiny no marina hoy ianao satria dia misy ireo mpitarika izany finoana sy fivavahana izany no pédophile sy homosexuel ka mijangajanga ami'ireo sarimbavy mivaro-tena eny Antaninarenina no lazaina mivavaka fa tsy manompo sampy ?
endriny - 15/11/2017 06:59
Mba fafao ilay andininy faha 30 fa tsy raharahian'ny Kristianina maro an'isa intsony e. Kanefa ange i Jehovah no niteny an'io e.
endriny - 15/11/2017 16:36
misy ireo mpitarika izany finoana sy fivavahana izany no pédophile sy homosexuel ka mijangajanga ami'ireo sarimbavy mivaro-tena eny Antaninarenina no lazaina mivavaka fa tsy manompo sampy ?
Firaisana ao amin'ny Tompo izany Tompoko
Ny Kristianina izao efa mamentsoventso ilay tsianjery hoe: "
1) Olombelona tsy tonga lafatra ange ny mpitondra fivavahana e.
2) Esory aloha ny tapak'ahitra amin'ny masonao vao mijery ireo mpitondra fivavahana lazainao ireo
3) Atra no ivavahanay fa tsy ireo mpitondra fivavahana ireo.
4) Efa maro ny kristianina ivelany fotsiny fa efa ho tonga ny farany.
Mazana ihany rehefa tratran'ny sur'eau a
Miharena - 15/11/2017 18:38
Raha misy milaza hoe fafao izatsy na izaroa ao anaty Baiboly dia manohitra an'Andriamanitra izay izy.
Izay voasoratra dia voasoratra fa ny olona izay tsy manaja izany dia efa manao fampianarana ho an'ny tenany ihany ary mety hitarika olona maro izy amin'izany.
Ampy ny Baiboly entina miaina.
Raha milaza isika hoe efa nanana an'i Zanahary ny Malagasy Ntaolo dia tsy azo lazaina ho diso izany tsy akory fa raha toa ka hita taratra kosa fa sampy voafaritra ao anaty Baiboly ilay zavatra ataony dia tsy izy izay. Fa ampy io Baiboly io milaza ireo fomban-tsampy misy maneran-tany. Ny sampy dia izay faritan'ny olombelona fa mpahary ankoatran'ny Mpahary Tena IZY.
Dia manao andriamanitra maro izay voary ihany ireo mpanompo sampy.
rhaj0 - 17/11/2017 13:08
hum... izany resak'i Miharena izany kosany ho'a dia ... maimbomaimbo..
Miharena Ampy ny Baiboly entina miaina.
Miharena - 17/11/2017 18:18
Raha io no maimbo dia tena hafahafa ihany ny atao hoe manitra aminao Rhaj0. Hoy ny Soratra Masina hoe lozan'izay manao ny tsara ho ratsy, sy ny manao ny ratsy ho tsara.
Sao dia efa lasa manao valim-boraingona fotsiny aza ianao ity namana na efa lasa lavitra fa avereno kely ny saina an!
endriny - 18/11/2017 06:30
Dia milaza mihintsy re hoe Atra mihintsy no nisafidy ireo boky ao amin'ny baiboly a. Dia milaza mihintsy hoe ireo boky tsy nampidirinareo ao anaty baiboly dia maimbo as an'i Satana a.
Tsy misy azo fafana hono ao anaty baiboly. Ny an-dRanesta enao o!
Miharena - 18/11/2017 13:18
Hoatry ny manao hoe fafao ny 1x1 ao amin'ny table fanaovan-kajy raha mamafa ny voasoratra na iza na iza nanoratra azy io ary na aiza na aiza soratra momba an'Andriamanitra Mpahary ka Tsindrimandry avy AMINY.
Hafahafa ilay teny hoe "tsy azo fafana hono ao anaty Baiboly". Tena foto-pisainanao ve io Endriny?
endriny - 21/11/2017 08:20
Fa ireo olona nanoratra ny boky no fafana ve tsy no eny tsindrimandry?
Andriamanitra manao bonbon izany ny anao Ka ny sasany vatomamy ary antsasany bonbon tangena koa
Miharena - 21/11/2017 11:11
Na dia misy manala aza ny boky ka Tsindrimandrin'Andriamanitra tsy maintsy miseho eny hatrany ary hita hoe marina ny voalaza ao.
Ny olana amin'ny milaza azy tsy mino dia izao: mihevitra izy fa lavitra na tsy misy Andriamanitra nefa raha IZY milaza fa Fiandohana sy Fiafarana dia miara-misy amintsika izany IZY.
Ny olona gadra ara-pisainana no tonga amin'ny tsoakevitra hoe TSY MISY MPAHARY. Ireo dia olona mandainga satria izany no hany mba sakafony angamba! Na koa hoe manaiky befahatany fotsiny hoe rehefa miteny Karl Marx hoe tsy misy Andriamanitra dia izy izay no tena manana fahamarinana.
Dia laviny hono ilay Baiboly sy ny tantara ao anatiny rehetra ao nefa iainan'ny olombelona ankehitriny avokoa ny zava-boalaza ao.
Dia mbola mahasahy ihany handa befahatany satria izay mba lazain;ny mpanao siansa sy ny ateista hono no marina!! Tena mba asio fiheverana fa misy tsy milamina ao an!
endriny - 21/11/2017 13:22
I Miharena ve izany mbola mino fa ny lanitra dia eo anelanelan'ny rahona sy ny ranomasina araka ny nanaovan'Atra azy tamin'ny andro faha telo.
Miharena - 21/11/2017 13:39
Raha miteny hoe lanitra tsotra dia io hitanao misy ny rahona io fa ny Lanitra izay misy an'Andriamanitra dia hitanao ao anaty Baiboly ao koa fa aza atao resa-jazakely ilay izy.
Izay haleha amin'ny fiainana mandrakizay no voalaza ao ary ny manahirana fotsiny dia hoe misy ireo izay mandeha any amin'ny helo ary misy ny miditra any an-danitra hiara-hiaina amin'Andriamanitra.
endriny - 21/11/2017 15:12
Hay ve azo ovaiovaina ohatran'izany ny lazain'ny baiboly e!. Dia manao resa-jazakely izany Atra nanao izao tontolo izao tamin'ny andron'ny Genesisy.
Mankasitraka anao nanambara izany taminay, fa dia mazava tsara io voalaza io. Ary voarakitra eto amin'ny seraseran'ny finoana